Ifuru etiti igwe
Igwe ọkụ ọnụ ụzọ ọkụ na -anabata ngwakọta nke igwe, ọkụ eletrik na hydraulic, njikwa dijitalụ ma nwee njikwa eletriki na akụrụngwa hydraulic. Echiche nke imewe, usoro ịkpụzi nwere ezi uche, ịdị mma ya dị mma, yana arụmọrụ nke igwe mebere ọnụ ụzọ ọkụ kwụsiri ike. Profaịlụ nke ngalaba dị iche iche na-enye azịza. Nye usoro nrụpụta nwere ọtụtụ ebumnuche yana arụmọrụ kwụsiri ike, ezigbo arụpụtaghị ihe, yana ịrụ ọrụ dị mfe.
Ngwa a na -anabata ihe nrịgo: GCr15 akpụpụtara nchara nchara, imenyụ agụụ, imecha nke abụọ na nchacha; Ihe isi ike nwere ike iru hrc58-60, plating chromium siri ike
Ọbịa Ọdịdị: wallboard ụdị, etiti adopts square tube ịgbado ọkụ Ọdịdị;
Mgbasa ozi kachasị bụ nnyefe bevel gear, na nnyefe n'etiti otu rollers ọ bụla bụ nnyefe bevel gear
Ịgba ọsọ ọsọ: ≤ 0-10m / min
* Ọrụ akụrụngwa
A na -eji ya maka ịgbatị agbatị nke ọnụ ụzọ nchekwa / okpokoro ọkụ
Ma ọ bụ ịse ihe nke windo na -enweghị ọkụ na efere agba.
* Usoro mmepụta
Igwe na -agbapụta, nri ntụzịaka, igwe na -akpụ akpụ, usoro ịgbazi, ịkpụ hydraulic, etiti na -agbaji.
* Nka nka
Nri efere ọkpụrụkpụ (1.2-1.5) mm
Ọsọ mmepụta (0-8) m / min
Ike injin isi 15-20kw
Ebumnuche bụ isi Anti -ezu ohi ụzọ na fireproof ụzọ etiti
Nhazi nnyefe Bevel gear
Ngwaahịa a bụ ngwaahịa ahaziri iche, dịka nhazi na nrụpụta ndị ahịa si dị, agba akụrụngwa dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Nrụpụta ọrụ nke igwe mebere ọnụ ụzọ ọkụ na -adaberekarị n'ụdị mpịakọta na nhazi nke ngwaọrụ mmepụta. Ngwá ọrụ mmepụta kacha eji eme bụ mpịakọta akpụ. Nsogbu dị mgbagwoju anya n'akwụkwọ mpịakọta oyi bụ mkpebi siri ike nke ọdịdị nke ala na -akpụ. Dika ihe achọrọ maka nkwụsi ike nke warara ahụ na ịdị mma nke profaịlụ na -abawanye na ọsọ na -akpụ, a na -etinye ihe dị elu na nke dị elu na mpịakọta akpụ.
Oghere ọnụ ụzọ ọkụ nwere ụdị dị iche iche na ụdị dị iche iche, nke a na -ejikarị eme ihe n'ịmepụta mkpọchi mkpọchi, okpokoro ụzọ, ụzọ ntuziaka, okpokoro windo, okporo ụzọ windo na profaịlụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ụzọ.
Nke gara aga: Igwe ncha nkuku 45 ogo
Igwe ncha nkuku 45 ogo
Igwe nrapado ọkụ
Nhazi nke archway nọọrọ onwe ya nke okooko osisi m ...
Hydraulic flanging igwe